Ihe m nwere ike ime mgbe m video Ntụgharị adịghị arụ ọrụ?
Gịnị mere My Video Ntụgharị-adịghị arụ ọrụ?
> Resource> tọghata> bụ N'ihi Gịnị Ka My Video Ntụgharị-adịghị arụ ọrụ?
Bụ gị video Ntụgharị-adịghị arụ ọrụ? Ị ego ma ọ bụrụ na e nwere ihe ezuru ebule ma ọ bụ ike diski ohere tupu re-wụnye ya? Ma ọ bụ eleghị anya ndị converted faịlụ-apụghị egwuri kwesịrị ekwesị. Ndị ọzọ ohere dị ka ihe mere gị video Ntụgharị ka jiri ma ọ bụ na-emezughị iji tọghata bụ n'ihi na enweghị nke na-akwado mmepụta faịlụ formats. Ikekwe Wondershare Video Ntụgharị Ultimate nwere ike idozi nke ahụ.
The video Ntụgharị bụghị nanị anụ ma ọ ejiri akakabarede ukwuu quicker karịa ndị ọzọ software na dị. Ọtụtụ ihe, ọ dịghị mgbe jiri on m.
1 bulite gị video faịlụ ozugbo maka akakabarede
Kama-emeghe nwere nchekwa, nanị ịdọrọ-n-dobe video faịlụ na-ịchọrọ ị-converted n'ime isi ihuenyo. Ọganihu mmanya na ala nke ihuenyo na-enye gị ihe na-egosi ihe bụ ihe ka dị gị DVD diski (ma ọ bụrụ na ị chọrọ iji nọgide na ya dị ka a DVD).
Ị nwere ike ịhọrọ iji tọghata ọ dabeere na mmasị gị, dị formats ma ọ bụ ọbụna site ngwaọrụ. Ọ bụrụ na i nwere ike ịhụ ya, nnọọ pịa na 'magnifier' ịrụ a ngwa ngwa search. All i nwere ime mgbe ahụ bụ pịa na tọghata bọtịnụ na ala aka nri akuku nke ihuenyo.
Rịba ama: Ọ bụrụ na ị na-adịghị mkpa dezie gị video faịlụ, kwuo nzọụkwụ 2 na nanị gaba 3rd nzọụkwụ.
2 Dezie gị video faịlụ n'ihu akakabarede
Ndị ọzọ karịa inwe ike iji tọghata gị video faịlụ, e nwere ndị ọzọ edezi atụmatụ dị ka ihe tinye-na na na-amasị ọrụ na-achọ ime ihe ndị dị mfe edits. Ị ga-enwe obi ụtọ ịhụ maara nhọrọ na-ekwe ka ị ewepụtụ, akuku ma tinye pụrụ iche mmetụta gị videos. Ikike tinye watermarks na-ebugote ndepụta okwu (dị ka kwa screenshot) nweghị isịneke.
3 Na-video faịlụ na agbanyeghị amasị gị na ya
Ị na-adịghị ọkụ nke converted video faịlụ ogologo jidesie a DVD n'ihi na ị nwere nhọrọ nke na-azọpụta ya dị ka a softcopy na ISO faịlụ Ọkpụkpọ. Dị nnọọ họrọ ISO faịlụ si apa ọkụ ka 's adaala.
Rịba ama: E nwere ụfọdụ ndebiri maka ị na-agagharị na ọ bụrụ na i chọrọ ike gị onwe gị DVD menu.
Ihe bụ ihe ọzọ na-akpali bụ na Video Converter Ultimate n'ezie na-abịa na a nnọọ pụrụ iche mma ebe ọrụ nwere ike ibudata videos online! Nke ahụ bụ ihe Download taabụ bụ maka. Cheta na-agbalị na mgbe ị na okokụre converting gị video faịlụ. Biko pịa HERE maka a ọzọ zuru ezu ndu ka otú ị nwere ike ibudata mmasịrị gị online.
Olee otú iji tọghata AVCHD ka AVI on Windows / Mac OS
Olee otú Jikọọ WMV Files